Dhoofinta xoolaha nool ee la geeyo dalalka Carabta oo si xowli ah uga socota Boosaaso (Sawirro) – Radio Daljir
Dhoofinta xoolaha nool ee la geeyo dalalka Carabta oo si xowli ah uga socota Boosaaso (Sawirro)
Seteembar 23, 2013 12:19 b 0
Bosaso, Sep 23 – Dhoofinta xoolaha nool oo ka ah ilaha ugu muhiimsan? ee uu ku tiirsanyahay dhaqaalaha Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey siweyn looga dareeymayay magaalada Bosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland.
Xoolo badan oo isugu jira Geella, Lo iyo ari oo laga kala keenay gobolada Soomaaliya iyo qaybo ka mid ah dalka Itoobiya ayaa ku xaraysan maxjarka lagu baaro caafimaadka xoolaha ee loo iibgeeyo caalamka , kaasi oo ku yaala magaalada Bosaaso.
Maamulaha Maxjarka Maxamed Faarax oo saxaafadda kula hadlay maxjarka ayaa sheegay shaqada maxjarka inay usocoto si dardar leh, isagoo ugu baaqay ganacsatada xoolaha inay ka faa’iidaystaan xiliyadaan oo kalle oo dalalka carabta xoolaha ugu badan ee Soomaaliya ka qaataan kahor inta aan la gaarin bisha Carafo.
Waxaa uu sheegay xoolaha oo laga dhoofinayo dekedda Bosaaso inay inay ku socdaan si wanaagsan , gudoomiyaha ayaa sanadkaan ku tilmaamay mid ka duwan sanadkii hore maadaama sanadkii hore abaar ay ku le’deen xoolo badan ay ka jirtay wadanka , balse sanadkaan uu curtay roobabkii la filayay.
Al-shabaab oo Twitter-ka ku shaaciyey magacyada ragga haysta gurriga Westgate ee Nairobi
Wasiiro iyo masuuliyiin heer gobol ilaa rugta ganacsiga ee Puntland oo tegaya Denmark (Dhegeyso)